I-El Toro: I-IP ejolise ekuSetyenzisweni, kwiNtengiso yeJografi engabonakaliyo | Martech Zone
I-El Toro: I-IP esekwe ekuJoliswe kuyo, iiNtengiso zeJografi ezingasasebenziyo
NgoMvulo, Matshi 12, 2018 NgoLwesithathu, Matshi 14, 2018 Douglas Karr
Kutshanje siye senza udliwanondlebe UMarty Meyer kwiqonga lakhe lentengiso, u-El Toro. Kuzo naziphi na iinkampani eziye zaphumeza imikhankaso ejolise ekujongeni, uyazi ukuba inzima kangakanani le nkqubo. Iidilesi ze-IP zihlala ziguquka, kwaye ukungqinisisa ukuchaneka kwabo ngumceli mngeni obalulekileyo. Yiloo nto itekhnoloji yelungelo lokushicilela elinde igunya lokunika u-El Toro abathengi bayo.
Nganye ye El ToroImveliso yobukrelekrele be-IP isusela kwi-algorithm yokujolisa kwi-IP ebangele isoyikiso kwishishini. Nazi ezinye zeemveliso zabo ezaziwa kakhulu:
Ukujoliswa kwe-IP yekhaya Ujoliso lwe-IP alusebenzisi iicookies, kwaye olo luphuculo kumhlaba wentengiso yedijithali. I-algorithm ye-IP enegunya lobunikazi i-El Toro imisela idilesi ye-IP esekwe kwidilesi ebonakalayo, ethi ke isetyenziselwe ukujolisa ngqo kwintengiso yedijithali kwinqanaba le-IP / router. Ukujolisa kwi-IP yekhaya kuluncedo kubathengisi kuba kubandakanya idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi; Oko kukuthi, uluhlu lwabavoti olubhalisiweyo, iziseko zedatha zabathengi, idatha emodelweyo, kunye nedatha yeposi ethe ngqo.
Ukudlala kwakhona indawo Indawo yokudlala kwakhona ikuvumela ukuba ubambe ii-ID zeZinto zabantu kwiminyhadala abaya kuyo, apho basebenza khona, apho bafunda khona, apho bathenga khona, konke ngenjongo yokubhengeza kolu phawu lwexabiso. Oku kwenziwa ngokusebenzisa i-geoframing, itekhnoloji eyenziwe ngu-El Toro. NgeNdawo yokuDlala kwakhona, i-El Toro inokubuyela emva ngexesha kwaye ibambe izixhobo ukusuka kwiminyhadala eyenzekileyo ukuya kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo! Indawo yokudlala kwakhona inika idilesi yasekhaya enokubakho kwezi zixhobo zibonwe kumsitho okhethiweyo. Ukusuka apho, siyakwazi ukujolisa kuthungelwano lwasekhaya ngeentengiso zebhanki yedijithali sisebenzisa itekhnoloji yethu ephambili, ukujolisa kwi-IP.
Reverse Faka -El Toro inokuthatha iidilesi ze-IP ezingaziwayo, kwaye uziqhube ngee-IP zazo Reverse Faka algorithm emisela ikhaya labo okanye idilesi yeofisi. Okanye ubeke enye indlela, sithatha idilesi ye-IP engaziwayo yendawo, sifumane idilesi yabo, kwaye sivumele ii-brand ukuba zibathumele iziqwenga zeposi ezijolise ngqo komnye wabalingani be-imeyile abakhethwe ngu-El Toro kwisithuba seeyure ezingama-48 zokundwendwela indawo.
Ukutshintsha kweDijithali eNtsha Ukutshintsha kweDijithali eNtsha (i-DNM) ibonelelwa ngeenyanga ezi-6 kunye nakwiinyanga ezili-12 zobhaliso. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha ukuba yeyiphi na ikhowudi ye-ZIP, isixeko, kunye / okanye urhulumente ofuna ukujolisa, faka ukubonakala kwenyanga, ulayishe izinto ezenziweyo kwaye uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukujolisa kwi-Pre-Movers, Escrow, kunye / okanye kwiPost-Movers. Inkqubo ka-El Toro ikwinkqubo, ekuvumela ukuba uhlale phantsi kwaye ujonge abantu abatsha xa ulwazi lukhona.
U-El Toro waziswa kuthi ngamaqabane ethu kwi-Digital Charisma. Ukuba uyinkampani enqwenela ukuvavanya amaphulo athile okanye ufumane ulwazi olongezelelweyo, nxibelelana namaqabane ethu kwi-Digital Charisma:
Qalisa ngo-El Toro
Ukuba ungumnini weshishini, iarhente yentengiso, inkampani yezopolitiko, okanye inkampani yeFortune 500 okanye umthengisi onqwenela ukusebenza ngqo noEl Toro:
Sebenza no-El Toro
tags: el toroUkujoliswa kwendawogeotargetingUkujolisa kwi-ipUjoliso olusekwe kwi-ip
Unokuboleka nini kwaye usebenzise uMfanekiso kwi-Intanethi?